Nri ịkọwa | Nutri Nri
Paul Heidemeyer | | Atụmatụ ifelata, Nkwere maka enyemaka
Na ụbọchị anyị zutere, enwere ihe anyị maara dịka "ofufe nke mmadụ«, Ọtụtụ ndị na-echegbu onwe gbasara ahụ ike ha, otu ha si ele anya, ole ha dị na otu ha si nwee abụba. Enwere ọtụtụ ndị na-achọ inwe ahụ mara mma karịa na nke mara mma.
Inwe ahụ siri ike, nke nwere anụ ahụ na-enweghị abụba a kwakọbara bụ echiche dị n'ọtụtụ mmadụ, mgbe ahụ anyị ga-agwa gị ihe ha bụ ihe kacha mma inwe nri ịkọwapụta na ihe igodo igodo.
Enwere nri na-ere ọkụ nke na-enyere anyị aka ịkọwa akwara anyị, ọ bụrụ na anyị soro ha n'ụzọ ziri ezi, anyị nwere ike nweta ahụ anyị chọrọ, n'agbanyeghị na anyị ga-aga n'ihu na usoro anyị omume iji tụọ ma kọwaa akwara.
1 Njirimara nke nri iji kọwaa
1.1 Basic Atụmatụ iburu n'uche
2 Nri ịkọwa na ire abụba
2.1 Nri ụtụtụ
2.2 E kwere ka nri dị iche iche
2.3 Nri na nri abalị
Njirimara nke nri iji kọwaa
Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-ahụ nsogbu nke ịchọ ịkọwa ahụ ha, iji kpochapụ abụba na-agbakọba n'akụkụ ụfọdụ na-enweghị ịhapụ oke akwara na ike ha. Ya mere, ọ dị mkpa ịme ihe oriri na-edozi ahụ na nke zuru oke ka nke a ghara ime.
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ iji wepu abụba ma kọwaa akwara ahụ, ị ​​ga-enwerịrị ezigbo nguzozi n'etiti oriri nke carbohydrates na protein.
Basic Atụmatụ iburu n'uche
Ekwesiri ighota na iji mezuo aru aru zuru oke, ekwesiri iri carbohydrates ka aru we nwee ume na wuo akwaraAgbanyeghị, ọ bụrụ na anyị gafere ihe oriri ahụ, anyị ga-akpata na kama ahụ anyị ga-enweta ume site na abụba, ọ ga-enweta ya naanị site na carbohydrates, anyị ga-enye ya na oke ya.
Ọzọ, anyị na-agwa gị ihe bụ igodo maka abụba ọkụ ma ghara ịhapụ ahụ ike.
Nri caloric gị na mmefu ike gị, ga-abụrịrị edozi. Ọ bụrụ na ị na-etinye ike karịa ka ị na-etinye na nri, ahụ gị ga-eji abụba, nke dị mma. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ijiri carbohydrates gafere, ị gaghị enwe ike ire abụba.
Na-a carbohydụ carbohydrates na-eji nwayọ nwayọ, na-ebelata ọnụnọ ya n'etiti 5% na 10%.
Rie nri 5 kwa ụbọchị na oke kwesiri. Ikwesighi ịga ogologo oge n'erighi nri ọ bụla, yabụ usoro metabolism gị ga-arụ ọrụ.
Ahapụla proteinMgbe ị na-achọ ịba abụba ma kọwaa akwara, protein dị oké mkpa iji jigide anụ ahụ dị mma.
Belata abụba oriri, ewepụla ha, kama rie nri ndị ahụ bara ụba na abụba abụba dị mma, dị ka mkpụrụ ma ọ bụ avocados. Aki oyibo ma ọ bụ mmanụ na-amaghị nwoke mmanụ.
Echefula inye mmiri. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme egwuregwu ị kwesịrị ịmị mmiri nke ọma mgbe ọ bụla mgbatị ahụ, ọ zuru oke maka akwara na akụkụ ahụ iji gbakee ma nata nri sitere na ọbara nke ka mma. Na mgbakwunye, ị ga - enyere aka iwepu abụba na nsị.
Nri ịkọwa na ire abụba
Ekwesighi iji ihe oriri anyi na enweta site na intaneti mee ya na uru ya, aghaghi idozighari ya ma ghazie imeghari ya. mkpa na ahụ onye ọ bụla. N'ihi nke a, anyị na-agwa gị ụfọdụ menu, efere ka ị nwee echiche dị mkpa banyere ụdị nkọwapụta ga-adị.
Ọzọ anyị ga-agwa gị ihe ụdị nri ụtụtụ "ụdị" ahụ nwere ike ịbụ ka ị nwee ike ịhazi usoro ịkọwa akwara na oke abụba.
Dum ọkas nke oat ma ọ bụ nke a sụrụ asụ, nke nwere mmiri ara ehi kpụkọrọ akpụkọ.
Mpekere nke mkpụrụ osisi oge: oroma, kiwi, banana, apụl, wdg.
Akwa, ọ ka mma ilekọta ndị ọzọ doo anya karia yolks, ya mere, ichota nri uto nke ndi ocha abuo na otu nkochi ime akwa di nma.
Yogọt dị ọcha na-acha uhie uhie tomato.
Black kọfị ma ọ bụ mmiri ara ehi skim.
E kwere ka nri dị iche iche
Were infusion mint, fennel, chamomile, wdg.
Ihe ọụ Juụ nke mkpụrụ osisi sitere n'okike, emebere maka tupu ọzụzụ.
Mberi achịcha jikọrọ jiri mmanụ oliv na tomato, soseji nwere obere ume nwere toki, toki, eke tuna ma ọ bụ skim mara mma.
Ogwe ọka niile.
Eke nkpuru osisi na akwukwo nri.
Nri na nri abalị
Carbohydrates, pasta na osikapa na agafeghị oke, agaghị agafe 100 grams. Ihe kacha mma bụ iji gram 75 na nri.
Ndi na-edozi: anụ ọkụkọ ma ọ bụ anụ ọcha ọcha.
N'ụdị ma ọ bụ ghee azụ.
Akụkụ akụkụ na ọmụmụ ihe mbụ: Akwukwo nri akwukwo nri ma obu ude, salad, akwukwo nri, akwukwo nri, broccoli, sie ma obu sie akwukwo, wdg.
Dịka ị pụrụ ịhụ, nke a abụghị nri mgbe niile, ebe ọ bụ na dị ka anyị kwurula, anyị na-enye gị ụfọdụ ihe ngosi ka ị nwee ike ịmepụta menu nke gị dabere na echiche ndị a. Dị ka ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwa akwara ma kpochapụ abụba dị gị n'ahụ na mpaghara ụfọdụ akọwapụtara, ị gakwuru onye ọkachamara ma ọ bụ na mgbatị ahụ n'onwe ya, ndị nkụzi nwere ike iduzi gị n'ime mkpebi.
Banyere nkọwa na nri, yanaỌ bụ usoro nwayọ nke chọrọ nnọgidesi ike na ike, nwere ebumnuche doro anya na nke dị adị iji mezuo ahụ ịchọrọ n'oge kwesịrị ekwesị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nkwere maka enyemaka » Nri ịkọwapụta
Gbakọọ abụba anụ ahụ